​वनभोजमा गैर कानूनी रुपले भाडामा लिइएका बस चढ्छन् युएईका नेपाली कामदार
Sat, May 26, 2018 | 12:00:11 NST
17:11 PM (1 year ago)
राम प्रसाद गैरे ‘बगर’/दर्लामडाडा ७ पाल्पा । हाल, युएई ।
हिजोआज युएईको मौसम पहारिलो छ । पहिले पहिले विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजना गरेर यहाँ कार्यरत नेपाली भेला हुन्थे र रमाइलो गर्थे । अहिले त्यसरी कार्यक्रम गर्न बन्देज लगाइएको छ । त्यही बन्देजका कारण यहाँका विभिन्न संघसस्थाले वनभोज कार्यक्रम गर्ने लहर नै चलेको छ ।
उनीहरुले होटलको कोठाकोठामा कार्यक्रम गर्न छाडेका छन् । व्यावसायिक कार्यक्रम पनि अनुमती बेगर आयोजना गर्न पाइन्न । त्यसैको फाइदा चाहिँ कतिपयले लिइरहेका छन् । तिनै चलाख नेपालीहरुले वनभोजको निहुँ पारेर अरु कार्यक्रमको विकल्प अपनाएको सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
विदेशको ठाउँमा जागिरबाट उभ्रिएको हप्ताको एक दिन बिदामा वनभोजमा रमाउनुको मज्जा नै छुट्टै हुन्छ । उसो भए बनभोज जायज छ त ? समाजसेवाका लागि भनेर युएईमा सयौं संघसस्था खुलेका छन् । हुन त कतिपयले सामाजिक काम पनि गरिरहेका छन । तर यिनीहरुलाई तौलिने तराजु युएईमै काम गर्ने कामदारकै हातमा छ ।
सामाजिक सेवामा समर्पित संस्थाहरुले प्रत्येक हप्ता वनभोज लैजाने गरेका छन् । बसमा दुई तीन सय जना कोचेर लगिन्छ । महँगो हुने भएकाले वनभोज जाँदा कानूनी मान्यता भएका बस भाडामा लगिन्न । एउटा कम्पनीको कामदार अर्को कम्पनीको गाडीमा बसेर यात्रा गर्नु युएईमा गैर कानूनी मानिन्छ ।
दैवको कानमा नपरोस्, यसरी गैर कानूनी रुपमा वनभोजमा हुँइकिएको बस दुर्घटनामा परे को जिम्मेवार हुने ? बिदाको दिन दुर्घटना पर्दा न कम्पनीले पनि हेर्दैन् ।अर्कातिर वनभोज स्थलमा रक्सी पिउने चलन छ ।
रक्सी पिएर हुने दुर्घटनाको जिम्मेवारी कसले लिने ? पोलेको खसी, छाला सहितको मासु, डिजे र दोहोरी, रक्सीको आश देखाएर संघसंस्थाले विदेशी भूमिमा गैरकानूनी काम गर्न शोभनीय हुँदैन । ५/६ घण्टाको बस यात्रा गैरकानूनी त छ नै, असुरक्षित पनि छ । मनोरञ्जन गर्ने नाममा केही आर्थिक लाभ लिएर संघसंस्थाहरुले वनभोज गर्नु जायज कि नाजायज ? उत्तर खोज्ने बेला भएको छ ।